बढ्दै छ बीमा बजार | गृहपृष्ठ
Home समाचार बढ्दै छ बीमा बजार
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:४६ समाचार
काठमाडौं । मुलुकको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति स्थापना भएको ५ दशक पूरा भएको छ । २०२५ सालमा स्थापना भएको समितिले जेठ १ गते बुधवार आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ । बीमा समितिसँग बीमा बजारबारे पुरानो आधिकारिक डाटा छैन । तर बीमा समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेशराज भट्टराईका अनुसार पहिले र अहिलेको बीमा बजारमा धेरै परिवर्तन आएको छ ।
२०४० सालमा काठमाडौं र यहाँका आसपासका क्षेत्रमा मात्र बीमा कम्पनीको पहुँच पुगेको उनी सम्झिन्छन् । त्यो समयमा बीमामा करीब एक हजार अभिकर्ता रहेकोमा जीवन र निर्जीवन दुवै गरी ५ ओटा मात्र बीमा कम्पनी थिए । हाल बीमा पहुँच मुलुकको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत भएकोमा त्यसबेला बीमाको पहुँच करीब एक प्रतिशत मात्र भएको भट्टराईको भनाइ छ ।
पहिले एक कम्पनीको कारोबार बढीमा २० लाख हुने गरेकोमा हाल एक कम्पनीको कारोबार अर्बौंको हुने गरेकोे बीमा कम्पनीहरूको तथ्यांकले देखाउँछ । भट्टराईका अनुसार शुरूमा बीमा समितिमा तीन जना मात्र कर्मचारी थिए, अहिले ९० जना कर्मचारी समितिमा कार्यरत छन् । बीमा कम्पनीतर्फ ४० को दशकमा करीब सय जना कर्मचारी कार्यरत थिए, हाल बीमा कम्पनीहरूमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
बीमा समितिले निकालेको तथ्यांकअनुसार देशमा चैत २०७५ सम्म १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनी र २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी गरी ३९ ओटा बीमा कम्पनी पुगेका छन् । तथ्यांकमा ४ लाख ८८ हजार ८३३ अभिकर्ता संख्या पुगेको देखाइएको छ । तर, समितिका अनुसार हाल १ लाख ५० हजार मात्र सक्रिय अभिकर्ता छन् ।
समितिको स्थापना भएपछि २०२६ सालको जेठमा १७ जनाले अभिकर्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । शुरूमा बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी २० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी रू. १ अर्ब हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाली बीमा क्षेत्रमा २०४९ पछि मात्र सर्भेयरको व्यवस्था हुन थालेकोमा हाल बीमा सर्भेयरको संख्या पाँच सय भएको समितिले बताएको छ । स्थापना कालमा आधारभूत बीमा पोलिसीमा खुम्चिएका कम्पनीहरुले अहिले धेरै क्षेत्रलाई समेटेका छन् । वर्तमान समयमा बीमा बजार कृषि, स्वास्थ्य, चलचित्र, खाद्य, पशु, साइबर जोखिम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६